चियाको रामकहानी ! - Himali Patrika
चियाको रामकहानी !
हिमाली पत्रिका २९ कार्तिक २०७६, 5:50 am
हामि नेपालीहरु त् दैनिक जसो चिया पिउने गर्छौ कोहि कालो कोहि सेतो त कोहि कफी पिउने गर्छौ हाम्रो देश पनि चियाको लागि निकै प्रख्यात छ हाम्रो देश बाट धेरै जसो चिया कफी हरु बाहिरि देशमा निर्यात हुने गर्दछ र हामीले चियाको प्रयोग गर्न थालेको पनि बर्सौ भैसक्यो आउनुहोस आज जानौ चियाको रामकहानी
उत्पत्तिको लामो समयसम्म चियाको लोकपि्रयताले चिनियाँ चिस्यानको भूमिबाट बाहिर जान सकेन । सन् ६१८ देखि ९०७ सम्मको युग चिनियाँ ताङ राजवंशको युग हो । यही समयलाई नै चिनियाँ इतिहासमा स्वर्ण युगको रुपमा मान्ने गरिन्छ । यही समय नै विश्वभर चियाको बिस्तारका लागि उत्कृष्ठ समय ठहरियो । तत्कालीन ताङ राजवंशले चियालाई चीनको राष्ट्रिय पेयको रुपमा मान्यता दिएसँगै यसले विश्व यात्राकोलागि उडान भर्न सुरु गर्‍यो ।
ताङ राजवंशको समयमा चिनियाँ यात्रीहरु विभिन्न देशमा जाने र अन्य यात्रीहरु चीन आउने परम्परा धेरै चलेको थियो । यो समयमा विभिन्न पश्चिमा मुलुकका धर्मप्रचारकहरु धर्मको प्रचार गर्न र व्यापारको अवसरको खोजीमा चीन पुगेका थिए । सोही समयमा चीनमा चर्चित भइसकेको चियाको संस्कृतिबाट प्रभावित भएर आफ्नो देशमा समेत यसको सिको गर्न सुरु गरेका थिए । योसँगै चीनको चिस्यानमा उमि्रएको चिया संस्कृति पश्चिमाको मुखमा चुस्की मार्न पुग्यो ।
सन् १२५४ देखि १३२४ को समयमा मार्काेपोलोले पनि पूर्वको यात्राको बारेमा लेखेका लेखोटहरुमा उनको चिया प्रेमको बारेमा उल्लेख पाइन्छ । पश्चिमा मुलुकमा पुगेर पनि लोकपि्रय बन्नको लागि चियाले कम्ती संघर्ष गरेन । त्यही समयमा कफीको लत बसेका तन्नेरीहरुको मन फर्काउनु थियो भने कुलीन वर्गले पिउने पेय पदार्थको रुपमा चिनेका युरोपेली महिलाहरुको भ्रम पनि मेट्नु थियो । मध्यकालमा युरोपका धेरै मुलुकमा पुगेको चियालाई केवल पोर्चुगेलीहरुले साथ दिए । त्यसैको साथले हरेक युरोपेलीहरुलाई आनन्द दिन सफल भयो ।
चियाको विषयमा चीन र युरोपबीचको युद्ध भएको इतिहाससमेत हामीसँग छ । १७ शताब्दीसम्ममा पुरै युरोपेलीहरुलाई चियाको लत बसिसकेको थियो । त्यो लतका कारण युरोपले चीनबाट व्यापक मात्रामा चियाको आयात गर्न थाल्यो । चीनले युरोपबाट उनका सामग्रीहरुको आयात गर्न थाल्यो । १७ औं र १८ औं शताब्दीमा, चिनियाँ सामग्रीको मागले (विशेष गरि रेशम, पोसेलिन माटोको भाडा र चिया ) युरोपमा बेलायत र चीनको चिङ राजवंशबीच व्यापारिक असन्तुलन सिर्जना गरेको थियो । युरोपेली चाँदीहरु चीनमा आउँथ्यो जसलाई चीनले भित्र्याउँथ्यो ।
चियाको तीब्र आवश्यकतासँगै युरोपेलीहरु व्यापार घाटाको अवस्थामा पुग्न थालेका थिए । त्यसपछि बेलायतीहरुले नयाँ जुक्ती निकालेर चिनियाँहरुमा अफिमको लत बसाइदिए । त्यतिबेला बि्रटिसले भारतमा आफ्नो उपनिवेश कायम गरिसकेको थियो । भारतमा व्यापाक मात्रामा अफिम खेती हुने भएकोले चिनियाँहरुलाई अफिम बेचेर नै बेलायतले आफ्नो व्यापारको नोक्सानीलाई पूर्ति गरेको थियो । त्यसको लागि स्थानीय एजेन्टहरु नै खडा गरेर चिनियाँहरुलाई अफिमको लत बसाउने गरिएको थियो । चिनियाँहरु युरोपेलीले आफूहरुलाई अफिमको लतमा फसाएको कारण चीनका तत्कालीन मानिसहरु केही पनि नयाँ सिर्जनात्मक काम गर्न नसक्ने भइसकेका थिए ।
यसरी चिनियाँहरु सधैं अफिमको लतमा फसेपछि सन् १८३९ मा चिनियाँ सम्राटले अफिमलाई अबैध घोषणा गरेर विदेशी व्यापार बन्द गरिदिए । कैयौं टन अफिम समुद्रमा कसैले नदेख्ने गरी नष्ट गराइयो । चीनको यो कारबाहीलाई बि्रटिस सरकारले आपत्ति जनाएपछि दुईपटकसम्म दुबै पक्षबीच युद्ध भएको थियो । यो युद्धलाई अफिम युद्ध नामले चिन्न थालियो । तर, यसको मूल कारण भने युरोपियनहरुमा बसेको चियाको लत नै थियो ।
नेपालको हिमाली भेगका मानिसहरुले क्यामेलिया साइनेन्सिस् युक्त पत्ताहरुको प्रयोग गर्न सुरु गरेको केही वर्ष मात्रै भएको लामाले जानकारी दिए । लामाका अनुसार झण्डै ३ हजार वर्ष पहिले पनि चीनको युनान प्रान्तबाट भोट भेगसम्म टी-ट्रेडको रुट थियो । सिल्क रोडले समेटेको ठाउँमा सोही बाटो हुँदै जाने र नसमेटेको ठाउँमा छुट्टै टी ट्रेड रुट बनाएर चिया ओसार पसार गर्ने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला चियालाई आधा प्रशोधन गरेर इट्टा जस्तो वा गोलो बनाएर भोट पुर्‍याउने गरिन्थ्यो ।
त्यतिबेला चियाहरु सुनसँग साँट्ने गरेको इतिहाससमेत छ । लामाका अनुसार भोट धेरैले प्रयोग गर्ने चिया डार्क टी हो । त्यो ६ प्रकारको चियामध्येकोे एक प्रकार हो । यो अहिले काठमाडौंकै गुम्बाहरुमा पनि भोटबाट आएकाहरुले पिउने गर्छन् । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी आफ्नो बालापनको समयताका काठमाडौंमा चिया खाने खासै चलन नभएको बताउँछन् । भोटबाट आएकाहरुले अर्काै किसिमको चिया ल्याएर दिन्थे । कसैकसैले त्यो खाने गर्थे । अहिलेप्रयोग भएजस्तै चियाको चलन त प्रजातन्त्र आएको पनि निकै पछि मात्रै सुरु भएको हो ।